ग्याल्पो लोसारको अवसरमा सार्वजानिक बिदा - नेपालबहस
ग्याल्पो लोसारको अवसरमा सार्वजानिक बिदा
| १५:०१:४४ मा प्रकाशित
१ चैत,फुङलिङ । ताप्लेजुङको तीन स्थानीय तहले ग्याल्पो लोसारका अवसरमा आज सार्वजानिक बिदा दिएका छन् । मेरिङ्देन गाउँपालिका, आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका र मैवाखोला गाउँपालिकाले ग्याल्पो लोसारमा सार्वजानिक बिदा दिएका हुन् ।
शेर्पा समुदाय बसोबास भएको स्थानीय तहले ग्याल्पो लोसारको दिन सार्वजानिक बिदा दिएको मेरिङदेन गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डम्बरबहादुर तुम्बाहङ्फेले बताए । ताप्लेजुङको मेरिङदेन, आठराई त्रिवेणी र मैवाखोला गाउँ पालिकामा शेर्पाहरुको बाहुल्य छ ।
बौद्ध धर्मावलम्बीको पर्र्व ग्याल्पो लोसार मान्यताअनुरूप हिमवत्खण्डबाट शुरु भएको ‘च्या लो’ ९चरा वर्ष० लाई बिदा गरी ‘खि लो’ ९कुकुर वर्ष० मनाइँदै आएको छ । बौद्ध धर्मको महायानी सम्प्रदायमा साम्बोटा लिपिले समेटेको हिमाली भोटचन्द्र पात्रो ९दतु०मा कोङ्पो, तोला, सोनाम र ग्याल्पो गरी चार वटा लोसार उल्लेख छ ।
शेर्पा, तामाङ, भोटे, गुरुङ, थकाली, ह्योल्मोलगायत बौद्ध धर्मावलम्बीले पात्रोअनुसार चारै वटै लोसार मनाउने गरेको फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका–७ घुन्सा निवासी पेमा शेर्पाले बताए । लोसारमा छेमार र छेयाङ्फुद सजाउने गर्छन् । नौ प्रकारका खानेकुरा मिसाएर पकाइएका खाना ९गुथुक०, खप्स र फलफूल खाएर आफ्ना आफन्तलाई शुभकामना दिने गरेको शेर्पाले बताए ।
प्रत्येक वर्ष १२ लो ९बाँदर, चरा, कुकुर, सुङ्गुर, मुसा, गाई, बाघ, बिरालो, ड्र्यागन, सर्प, घोडा र भेँडा ० वर्ष परिवर्तन भएर नयाँ वर्षको शुरुआत हुन्छ । तिथि परिवर्तन भई १२ महिना सकिएर नयाँ वर्ष लागेसँगै ग्याल्पो लोसार मनाइने गरिन्छ । हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाले लोसार ९नयाँ वर्ष० लागेको शुभ सङ्केतस्वरूप जौ र गहुँका बाला राख्ने गर्छन् । पात्रो अनुसार १२औंँ महिनाको पहिलो दिन सोनाम लोसार मनाउने गरेको फक्तालुङ गाउँपालिका–७ निवासी छेतेन लामाले बताए ।
सोमबार पाँच अर्ब २० करोड बराबरको ट्रेजरी बिल विक्री हुने ४२ मिनेट पहिले
सरकारलाई तत्काल शिक्षण संस्था बन्द नगर्न सरोकारवालाको सुझाव ६ दिन पहिले
शिक्षकलाई तलब खुवाउन आर्थिक सहयोग सङ्कलन ४ दिन पहिले
स्याङ्जाको भिरकोटमा करेन्ट लागेर एक जनाको मृत्यु ७ दिन पहिले
ओलीको अभिव्यक्ति अनियन्त्रित र अराजक भएको डा. लोहनीको टिप्पणी ९ महिना पहिले
ओलीलाई नेपालको प्रश्न अपरिपक्व ढंगले निर्णय गर्न मिल्छ ? २ वर्ष पहिले
काठमाडौं छिरेका ४० जनामा कोरोना ! ८ महिना पहिले
कोरोनाबाट रुपन्देही थप दुई संक्रमितको मृत्यु ५ महिना पहिले